ဟိုအရင်​ကအလွန်​အင်​မတန်​မှကို ခေတ်စားခဲ့သော “မင်းလက်ကလေး ကိုင်ချင်လို့တစ်စက္ကန့်လောက် ခွင့်ပြုပါ” ဆိုတဲ့ သီချင်း​လေးထဲက အဆိုတော် စိုးမိုးမင်း ကွယ်လွန် – Maythadin
ဟိုအရင်​ကအလွန်​အင်​မတန်​မှကို ခေတ်စားခဲ့သော “မင်းလက်ကလေး ကိုင်ချင်လို့တစ်စက္ကန့်လောက် ခွင့်ပြုပါ” ဆိုတဲ့ သီချင်း​လေးထဲက အဆိုတော် စိုးမိုးမင်း ကွယ်လွန်
အဆိုတော် ? ဇာနည်ရဲ့ နာမည်ကြီး သီချင်းတွေထဲက တစ်ပုဒ်ဖြစ်တဲ့ “တစ်စက္ကန့်” သီချင်းလေးကို ပရိသတ်တော်တော်များများ သိပြီးသား ဖြစ်မှာပါ။ “တစ်စက္ကန့်” သီချင်းလေးမှာ ? ဇာနည်နဲ့အတူတူ ??? စာသားတွေ သီဆိုတဲ့ ???? အဖွဲ့က အဆိုတော် စိုးမိုးမင်းနဲ့ လင်းလင်းတို့ကိုလည်း
ပရိသတ်ကြီးကို ထွေထွေထူးထူး မိတ်ဆက်ပေးဖို့ လိုမယ် မထင်ပါဘူး။ ဒီသီချင်းလေးက လွန်ခဲ့တဲ့ ဆယ်နှစ်ကျော်က ထွက်ရှိခဲ့တယ်ဆိုပေမယ့် ဒီနေ့ဒီအချိန်ထိ ပရိသတ်တွေကြားထဲမှာ ရေပန်းစားအောင်မြင်နေဆဲ သီချင်းတစ်ပုဒ် ဖြစ်ပါတယ်။ဒီကနေ့မှာတော့ စိတ်မကောင်းစရာ
သတင်းတစ်ခုက “တစ်စက္ကန့်” သီချင်းထဲက အဆိုတော် စိုးမိုးမင်းက ကွယ်လွန်သွားခဲ့ပြီလို့ သိရပါတယ်။ အဆိုတော် စိုးမိုးမင်းရဲ့ ကွယ်လွန်မှုနဲ့ ပက်သတ်ပြီး “သူငယ်ချင်းတို့ ငါတို့ကောင်ကြီး ” စိုးမိုးမင်း” ဆုံးသွားပြီကျော်သူစိုး လှမ်းပြောတာ ကောင်းရာမွန်ရာရောက်ပါစေကွာ” ဆိုပြီး
ငယ်သူငယ်ချင်း အဆိုတော်တွေကို ဖေ့စ်ဘုတ်စာမျက်နှာကနေတဆင့် အသိပေးထားတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ စိုးမိုးမင်းကတော့ မြန်မာနိုင်ငံမှာ ??? ??? သီချင်းတွေ စတင်ပေါ်ထွက်ခဲ့စဉ်ကတည်းကသူတို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်လမ်းကြောင်းတစ်ခုကိုဖောက်ထွက်နိုင်ခဲ့တဲ့လူငယ်အဆိုတော်တစ်ယောက်ပဲ
ဖြစ်ပါတယ်။ ပရိသတ်ကြီးလည်း ငယ်ငယ်က ကြိုက်ခဲ့ရတဲ့ အဆိုတော်တစ်ယောက် ကွယ်လွန်သွားလို့ ဝမ်းနည်းစိတ်မကောင်းဖြစ်နေကြမယ် ထင်ပါတယ်။ ဖတ်ရှုပေးတဲ့ ပရိသတ်ကြီးအားလုံးလည်း သာယာပျော်ရွှင်တဲ့နေ့လေးတစ်နေ့ကို ပိုင်ဆိုင်နိုင်ပါစေလို့ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်။ ခရက်​ဒစ်​
အဆိုတျော ? ဇာနညျရဲ့ နာမညျကွီး သီခငျြးတှထေဲက တဈပုဒျဖွဈတဲ့ “တဈစက်ကနျ့” သီခငျြးလေးကို ပရိသတျတျောတျောမြားမြား သိပွီးသား ဖွဈမှာပါ။ “တဈစက်ကနျ့” သီခငျြးလေးမှာ ? ဇာနညျနဲ့အတူတူ ??? စာသားတှေ သီဆိုတဲ့ ???? အဖှဲ့က အဆိုတျော စိုးမိုးမငျးနဲ့ လငျးလငျးတို့ကိုလညျး
ပရိသတျကွီးကို ထှထှေထေူးထူး မိတျဆကျပေးဖို့ လိုမယျ မထငျပါဘူး။ ဒီသီခငျြးလေးက လှနျခဲ့တဲ့ ဆယျနှဈကြျောက ထှကျရှိခဲ့တယျဆိုပမေယျ့ ဒီနဒေီ့အခြိနျထိ ပရိသတျတှကွေားထဲမှာ ရပေနျးစားအောငျမွငျနဆေဲ သီခငျြးတဈပုဒျ ဖွဈပါတယျ။ဒီကနမှေ့ာတော့ စိတျမကောငျးစရာ
သတငျးတဈခုက “တဈစက်ကနျ့” သီခငျြးထဲက အဆိုတျော စိုးမိုးမငျးက ကှယျလှနျသှားခဲ့ပွီလို့ သိရပါတယျ။ အဆိုတျော စိုးမိုးမငျးရဲ့ ကှယျလှနျမှုနဲ့ ပကျသတျပွီး “သူငယျခငျြးတို့ ငါတို့ကောငျကွီး ” စိုးမိုးမငျး” ဆုံးသှားပွီကြျောသူစိုး လှမျးပွောတာ ကောငျးရာမှနျရာရောကျပါစကှော” ဆိုပွီး
ငယျသူငယျခငျြး အဆိုတျောတှကေို ဖစျေ့ဘုတျစာမကျြနှာကနတေဆငျ့ အသိပေးထားတာပဲ ဖွဈပါတယျ။ စိုးမိုးမငျးကတော့ မွနျမာနိုငျငံမှာ ??? ??? သီခငျြးတှေ စတငျပျေါထှကျခဲ့စဉျကတညျးကသူတို့ရဲ့ကိုယျပိုငျလမျးကွောငျးတဈခုကိုဖောကျထှကျနိုငျခဲ့တဲ့လူငယျအဆိုတျောတဈယောကျပဲ
ဖွဈပါတယျ။ ပရိသတျကွီးလညျး ငယျငယျက ကွိုကျခဲ့ရတဲ့ အဆိုတျောတဈယောကျ ကှယျလှနျသှားလို့ ဝမျးနညျးစိတျမကောငျးဖွဈနကွေမယျ ထငျပါတယျ။ ဖတျရှုပေးတဲ့ ပရိသတျကွီးအားလုံးလညျး သာယာပြျောရှငျတဲ့နလေ့ေးတဈနကေို့ ပိုငျဆိုငျနိုငျပါစလေို့ဆုတောငျးပေးလိုကျပါတယျ။ ခရကျဒဈ